तिथि मेरो पत्रु » एक नारी अनलाइन दृष्टिकोण कसरी - एक महिलाको दृष्टिकोणबाट
एक नारी अनलाइन दृष्टिकोण कसरी - एक महिलाको दृष्टिकोणबाट
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 13 2021 |5मिनेट पढ्न
म विवाह अघि म अनलाइन डेटिङ मेरो उचित भाग अनुभव, अनलाइन क्षमता केटा देखि धेरै ई-मेल सहित. म साँच्चै राम्रो देख्न प्राप्त गरे, खराब र कुरूप. अनि म अनलाइन डेटिङ को आफ्नो अनुभव बारे मेरो गर्लफ्रेन्ड संग धेरै गर्थें छन्. यो लेख एक महिलालाई एक पहिलो ई-मेल लागि राम्रो काम गर्दछ के सारांशमा र के चिसो हाम्रो रगत संख्या बनाउँछ र हाम्रो हात खुट्टा को अन्त अघि DELETE मारा!
अनुकूल हुन गर्नुहुन्छ - यो स्पष्ट आवाज र तपाईंले तिनीहरू आफ्नो उद्घाटन ई-मेल पठाउन जब यो बिर्सन कति मानिसहरू छक्क हुनेछ. मस्तिष्क को तार्किक पुरुषत्व भाग अधिक लिन्छ र तिनीहरू व्यापार गर्न अधिकार प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ यद्यपि रूपमा यो हो (फोन / डेटिङ वा सेक्स कुरा). दुर्भाग्य हामी महिलाहरु यसरी काम छैन. हामी हाम्रो खुट्टा डुबकी र हामी पहिलो तपाईं संग महसुस कसरी हेर्न चाहन्छु. हामी romanced र तपाईं देखि अनुकूल कुराकानी र ध्यान अनुभव गर्न मन. यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने 'हामीलाई न्यानो पार्दै' रूपमा यो विचार. एक अनुकूल सधैं खुला, कुराकानीको ई-मेल (धेरै लामो छैन) र तपाईं धेरै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त हुनेछ.
राख्न सक्छौं यो प्रकाश र रोचक - कब्जाने रोचक / ध्यान बीच सन्तुलन छ र पर्खाल / बन्द-डाल. म तपाईं एउटा राम्रो उद्घाटन ई-मेल लेख्न प्रयास गर्दा यो दबाब जस्तै महसुस गर्न सक्छन् भनेर थाह. म दिन सक्छ सबै भन्दा राम्रो सल्लाह आफैलाई हुनु हो. पट्यारलाग्दो नहुन कसरी तल खण्ड पढ्नुहोस् र यहाँ तपाईं रोचक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत मदत र उनको तपाईं जवाफ लायक हो थाह दिनु लागि सुझाव को एक जोडी हो. ध्यान उनको प्रोफाइल पढ्नुहोस् र त्यहाँ पाउन केही टिप्पणी. एक जडान सिर्जना गर्न सम्भव छ भने यो केहि फिर्ता गर्न अनुभव गरेका छन् बताउनुहोस्. बधाई राम्रो तिनीहरूले overdone छैनन् र साँचो हो प्रदान काम गरे. एक सानो प्रशंसा एक पहिलो ई-मेल को लागि राम्रो छ. तपाईं पनि आफ्नो दिन मा तपाईं के भएको छ भन्ने कुरा कुरा गर्न सक्छन्, तिमी को हो को एक बिट देखाउँछ कुरा. तपाईं एक अजीब मान्छे हो भने एक सानो हास्य निःशुल्क प्रयोग गर्न महसुस, बस यो ज्यादा छैन. ड्राई हास्य सजिलै ई-मेल मार्फत misconstrued सकिन्छ. महिला भावना र साझा अनुभवहरूबाट जडान, तपाईं तिनीसित जडान सिर्जना गर्न सक्छ भने र तपाईं आधा बाटो हो.
छोटो राख्न के - हामी चाहन्छौं तापनि तपाईं अनुकूल हुन र मजा हामी एक निबन्ध चाहँदैनन्. हामी सबै यो पढ्न भने लेखन को एक पुरा पेज संभावना सो हामीलाई पठाउन हुनेछ, तथापि यो हुन सक्छ riveting. सबै भन्दा राम्रो मा हामी यो पढ्न स्किम सक्छ र हामी लेखन को एक सम्पूर्ण पेज हेर्न ई-मेल खोल्न जब हामी आलोचक हुन र आत्म ग्रसित छन् भने आश्चर्य हुनेछ! हामीलाई पढ्नका लागि आफ्नो ई-मेल सुलभ र सजिलो हुनु आवश्यक छ, जो छोटो अर्थ र ध्यान हथियाने. मात्रा अधिक गुणवत्ता को लागि जाओ. केही छोटो र impactful अनुच्छेद र एक प्रशंसा सफलता को लागि एक नुस्खा छ.
पट्यारलाग्दो हुन नगर्नुहोस् - ठीक म भन्न के थाह यो गाह्रो हुन सक्छ महसुस, त्यसैले म तिमीलाई छिटो संकेत को एक जोडी दिन जाँदैछु. नरमाइलो यस्तो आफ्नो झुकाउ रूपमा आफैलाई बारेमा सामान को एक सूची लेखन छ, या बस त्यो कुनै अन्य जानकारी कुरा को लागि छ कि उनको प्रश्न जो एक सन्देश पठाउन. त्यो आफ्नो ई-मेल देखि आफ्नो व्यक्तित्व लागि एक महसूस प्राप्त गर्दैन भने उनले कुरा गर्न चाहनुहुन्छ कि थाहा छैन. अनि त त्यो सिर्फ जवाफ कष्ट छैन. तपाईं उसलाई फिर्ता लेख्न बाध्य महसुस गर्न चाहनुहुन्छ. बस आफ्नो प्रोफाइल लेखन नगर्नुहोस्, त्यो चासो छ भने त्यो कि पढ्न हुनेछ.
घटिया नगर्नुहोस् - धेरै मानिसहरू overcompensate र पनि कडा प्रयास गर्नेछ. यो प्रशंसा र / वा हास्य को भन्दा-उपयोग जस्तै लाग्न सक्छ, र सधैं घटिया को रूप मा सबै भन्दा राम्रो बन्द आउछ, र मा खराब लागिपरेको रूपमा. तपाईं एक महिला मित्र कुरा मानौं उसलाई लेख्नुहोस्, त्यो पनि औपचारिक भएर उनको प्रभावित लागि कडा परिश्रम गरिरहेका मन सेट फसेका तपाईंलाई रोक्न हुनेछ. हास्य र प्रशंसा प्रयोग तर sparingly. नुन राम्रो खाना बनाउँछ बस जस्तै wiper, जब यो नै राम्रो छ, यही सिद्धान्त यहाँ लागू.
आफ्नो सबै आवश्यकताहरु सूची छैन - कहिलेकाहीं मानिसहरू पहिलो ई-मेल मा एक महिला मा देख रहे सबै कुराहरू सूची हुनेछ. अनि कहिलेकाहीं तिनीहरूले चाहँदैनौं भनेर सबै गुण सूची हुनेछ (झनै - cringe!) यो कठोर रूपमा बन्द आउछ र चिसो एक महिला परिणत हुनेछ. उनले तिमीलाई यो भने जवाफ संभावना छ.
तपाईं अनलाइन भेट गरेका छन् अन्य महिला बन्द लावा नगर्नुहोस् - दुःखको कुरा यो पनि मेरो अनलाइन डेटिङ दिन मा साधारण थियो, र यो सधैं चिसो मलाई फर्केर. एक महिला उहाँले दिनांक छ अर्को स्त्री बन्द slagging एक मानिस सुन्न लागि यो धेरै असहज छ. हामी सोच रहे हाम्रो मन को फिर्ता हामी उनको जस्तै भाग्य भाग हुनेछ र यसले हामीलाई tenderhooks सोच मा महसुस भने तपाईं यहाँ को थिए रूपमा तपाईं हामी रूपमा आलोचक दिइँदैछ भने. विपत्तिको जस्तै यस जोगिने.
पहिलो ई-मेल मा सेक्स कुरा नगर्नुहोस्! - म तपाईं एक महिला फेला आकर्षक तपाईं शारीरिक सोचेका बुझ्न, र यो पनि गलत छैन. तर हामी महिलाहरु सेक्स लागि विशुद्ध नजिक बारेमा धेरै संवेदनशील छन्. एक अनलाइन डेटिङ साइट प्रयोग गर्ने सबै भन्दा महिलाहरु को लागि, यो हामी त्यहाँ छन् एउटा मुख्य कारण छैन, हामी डेटिङ र / वा एक जीवन साथी को खोज. म नै पनि डेटिङ साइट मा गर्ने पुरुष को विशाल बहुमत लागि साँचो छ थाहा, र दुर्भाग्य तिनीहरूले राखे लिन चाहनुहुन्छ किनभने बस छन् जो धेरै मानिसहरू पनि छन्. अनि हाम्रो रडार संवेदनशीलता ती मानिसहरू पत्ता लगाउन रूपबाट छन्. हामी धेरै चाँडै तिनीहरूलाई बाहिर स्क्रीन हुनेछ, त्यसैले 'ती मानिसहरूको' को रूपमा लेबल नदिन. आफ्नो पहिलो ई-मेल मा यौन केहि उल्लेख जोगिने. सल्लाह पुरुष देखि वहाँ बाहिर छ कि म वृद्धि र यौन तनाव बढाउने विषयमा वार्ता जो 'कलाकार टिप्न' थाहा छ, र यो राम्रो र असल सबै छ, तथापि मेरो विचारमा यो अनलाइन डेटिङ लागि काम गर्दैन. कम से कम यो केवल जब एक निश्चित तरिका गरेको काम गर्दछ. मजा प्रेमलीला उत्कृष्ट छ, आफ्नो पहिलो संचार मा तपाईं पनि यौन भर आएका छन् तर यदि तपाईं यो पनि छ कि चरण बनाउन छैन. हामीलाई महिलालाई यो crass छ. यो एक सर्टकट जस्तै महसुस र हामी तपाईं मा यस दृष्टिकोण खोजिरहेका छन् जनता को हो विश्वास. सम्झना, त्यो विशेष महसुस गर्न चाहनुहुन्छ. पहिलो एक जडान मा काम, त्यसपछि केही कोमल प्रेमलीला.
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो मनमा सही सेट प्राप्त - त्यो स्वर्गीय हुन सक्छ, र त्यो धेरै बाहिर एउटा स्त्री छ सम्झना. तपाईं आफ्नो संदेश जवाफ अनलाइन महिलाहरु संग जोडने र रही समस्या भएको छ भने, पहिलो सेट आफ्नो मन मा हेर्न. तपाईं लागिपरेको महसूस गर्दै? के यसलाई पठाउन जब तपाईं एक ई-मेल मा आफ्नो सबै आशाहरू ठान्छु? त्यसैले यो ई-मेल मा भर आउनेछ र महिला पन्छाउन भने. आफ्नो आत्मविश्वास र मन मा काम के तपाईं लागि धेरै विकल्प हो थाहा ताकि सेट. तपाईंको आउनेछ मिति र कुनै पनि परिणाम 1 ई-मेल महत्त्वपूर्ण छैन. यस मजा पठाउन तपाईं सक्षम हुनेछ, एक राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त हुनेछ भन्ने आकर्षक र प्रकाश दिल सन्देश.